Thu, Jun 4, 2020 at 8:48pm
ललितपुर, २१ कात्तिक जिल्लाको सबैभन्दा लामो नाट्य महोत्सवअन्तर्गत कात्तिक नाचको आज सातौँ दिन देवी नृत्य मञ्चन गरिने भएको छ । पाटनको मङ्गलबजारस्थित चार नारायण मन्दिर अगाडि कात्तिक डबलीमा साँझ ७ बजेदेखि महोत्सव अवधिभर उक्त नाच मञ्चन हुँदै आएको छ । आज उषाहरण लीलामा आधारित नाच मञ्चन हुने कात्तिक नाच संरक्षण समितिका अध्यक्ष किरण प्रधानले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सो नाचअन्तर्गतको देवी नृत्यमा..
रुपन्देही, २१ कात्तिक बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा यस वर्ष हुने अन्तरराष्ट्रियस्तरको त्रिपिटक वाचनमा २५ देशले सहभागिता जनाउने भएका छन् । त्रिपिटक च्यान्टिङ आयोजक समितिको मुख्य आयोजना तथा प्रदेश ५ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, लुम्बिनी विकास कोष र थाई विहारको सहयोगमा दोस्रोपटक बुद्ध धर्मको मूल ग्रन्थ त्रिपिटक वाचन कार्यक्रम हुन लागेको हो । कात्तिक २८ देखि ३० गतेसम्म मायादेवी मन्दिर परिसरमा..
काभ्रेपलाञ्चोक, २० कात्तिक । भुम्लु गाउँपालिकाले यही कात्तिक २२ गते हरिबोधनी एकादशीका दिन सार्वजनिक बिदा दिएको छ । गाउँपालिकाका बासिन्दालाई स्थानीय पर्वमा सहभागी हुन अपिल गर्दै सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो । स्थानीय संस्कृति, परम्परा, जात्राको संवद्र्धन प्रवद्र्धनका लागि बिदा दिइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष गुमानध्वज कुँवरले बताउनुभयो । “मूलखर्क भीमसेनस्थानमा हुने जात्राका लागि सार्वजजिक बिदा दियौँ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार उक्त..
ललितपुर, १९ कात्तिक ललितपुरको लोक प्रसिद्ध परम्परागत तथा ऐतिहासिक ३७९ वर्ष पुरानो कात्तिक नाचको आज पाँचौं दिन बाथःप्याखँ (महामूर्ख) नाटक मञ्चन भएको छ । पाटनको मङ्गलबजारस्थित चार नारायण मन्दिर अगाडि कात्तिक डबलीमा साँझ ७ बजेदेखि कात्तिक नाच हुँदै आएको छ । सो नाचको पाचाँै दिन आज बाथःप्याखँ (महामूर्ख) नृत्य वा नाटकको संवाद मञ्चन गरिएको कात्तिक नाच संरक्षण समितिका अध्यक्ष किरण प्रधानले..
ललितपुर, १८ कात्तिक ललितपुरको लोक प्रसिद्ध परम्परागत तथा ऐतिहासिक ३७९ वर्ष पुरानो कात्तिक नाचको आज चौथो दिन बाथःप्याखँ (तिखिकाँ, छ्योँ ध्वग्गी, सति वनेगु) अर्थात सति जाने परम्परालाई नाचमा देखाइएको छ । पाटनको मङ्गलबजारस्थित चार नारायण मन्दिर अगाडि कात्तिक डबलीमा साँझ सातबजेदेखि कात्तिक नाच हुँदै आएको छ । सो नाचको कथामा तीन जना बाठा दाजुभाई हुन्छन् । यी तीन मध्ये एक जनाले बाठो..
काभ्रेपलाञ्चोक, १७ कात्तिक खोज तथा अनुसन्धानका क्रममा काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगर क्षेत्रमा भेटिएका सम्पदा सामग्री तथा स्तम्भ लिच्छविकालीन र मध्यकालीन भएको पुष्टि भएको छ । गत जेठमा पाँचखाल नगरपालिकाको श्रीरामपाटीस्थित खेतमा उत्खनन्का क्रममा भेटिएका सामग्री लिच्छविकालीन र मध्यकालीन ऐतिहासिक सम्पदा भएको प्रतिवेदन पुरातत्व विभागले तयार पारेको छ । उत्खनन्मा सहभागी पुरातत्व विभागका अधिकृत विष्णुप्रसाद पाठक र वरिष्ठ पुरातत्वविद् उद्धव आाचार्यद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा..
काठमाडौँ, १७ कात्तिक आज बिहान उदाउँदो सूर्यलाई पूजाआजासहित अघ्र्य दिई चार दिन लामो छठपर्व समापन गरिएको छ । कात्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म मनाइने पर्वको मुख्य दिन शनिबार अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजाआजासहित अघ्र्य दिइएको थियो । उपत्यकाका गुह्येश्वरी, कमलपोखरी, गहनापोखरी, नागपोखरी, शङ्खमुल, थापाथली, वाग्मती, विष्णुमती, नख्खु नदीकिनारका अन्य स्थानमा पनि छठी घाट निर्माण गरी जल एवं सूर्यदेवको आराधना र उपासना गर्न भक्तजनको भीड लागेको..
जनकपुरधाम, १७ कात्तिक । आस्थाको महापर्व छठपर्वअन्तर्गत व्रतालुहरूले आज यहाँ उदाउँदो सूर्यलाई अघ्र्य दिई पर्वको समापन गरेका छन् । मूलविधि चतुर्थीदेखि शुरू भई षष्ठीका दिन बेलुकी अस्ताउन लागेको र सप्तमीका दिन उदाउँदो सूर्यलाई अघ्र्य दिई पूजाअर्चना गरी यो पर्वको समापन गर्ने परम्परा रहेको छ । व्रतालुहरू यहाँका इतिहास वर्णित सरोवर गङ्गासागर र अरगजालगायतका पोखरीमा दुवै हत्केलामा पिठार र सिन्दुर लगाई अक्षता, फूल..
काठमाडौँ, १६ कात्तिक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी छठपर्वको उपलक्ष्यमा आज गुह्येश्वरी जानु भई बाग्मती नदीबीचमा स्थापित छठी माताको मन्दिरमा पूजाअर्चना गर्नुभयो । छठपर्व मनाउन गौरीघाटदेखि गुह्येश्वरीसम्मको इलाकामा बाग्मती नदीको पानीको बहाव रोकेर निर्माण गरिएको तलाउको बीचमा स्थापित छठी माताको मन्दिरमा पुगेर राष्ट्रपति भण्डारीले पूजाअर्चना गर्नुभएको हो । छठपर्वको मुख्य दिन आज साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजाआराधना गरी अघ्र्य दिने गरिन्छ । उक्त ठाउँमा नदीको..
जनकपुरधाम, १६ कात्तिक शुद्धता, सद्भाव र आस्थाको पर्व छठ आज श्रद्धा एवं हर्षोल्लासपूर्वक मनाइँदैछ । आराध्यदेव सूर्यको आराधना गरी मनाइने यस पर्व अन्र्तगत व्रतालुले आज बेलुकी कुण्ड, पोखरी र तलाउमा उभीएर दुवै हत्केलामा पिठार र सिन्दूर लगाएर अक्षता, फूल हालेर खेतबारीमा भएका पूजा सामग्री र घरमा बनाइएको विशेष पकवान अस्ताउन लागेको सूर्यलाई अघ्र्य दिई पूजापाठ गर्ने छन् । सन्तान प्राप्ति, निरोगिता, सुख,..
काठमाडौँ, १५ कात्तिक छठपर्वको दोस्रो दिन अर्थात् कात्तिक शुक्ल पञ्चमीका दिनमा आज व्रतालु निर्जल उपवास बसेका छन् । जल अर्थात् पानीसमेत नखाई व्रत बसिने भएकाले यस दिनको विशेष महत्व रहेको छ । षष्ठीका दिन अस्ताउँदो सूर्यलाई अघ्र्य दिने तयारीस्वरुप आज निर्जल उपवास बस्ने गरिएको हो । यस दिन बेलुकी घरमा खीर बनाई चन्द्रमालाई अर्पण गरिन्छ । चन्द्रमालाई खीर चढाएपछि व्रतालुले एक छाक..
पोखरा, १४ कात्तिक लोक आस्थाका पर्व छठ गण्डकी प्रदेशको पोखरामा पनि आजबाट विधिवत रूपमा शुरु भएको छ । लगातार चार दिनसम्म मनाइने गरिएको यस पर्वको अवसरमा तराईका विभिन्न जिल्लाबाट रोजगारका लागि पोखरामा बसोबास गर्नेहरु धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्व छठ उत्साहका साथ मनाउन जुटेका छन् । छठपर्व मनाउनका लागि आवश्यक बाँसका टोकरीलगायतका सामग्रीहरु सहजरूपमा पाउनु, स्थानीयवासीको पर्वप्रतिको अभिरुचि तथा सहयोगी भावनाका कारण पोखराको..
जनकपुरधाम १४ कात्तिक आस्थाको महापर्व छठअन्तर्गत आज पहिलो दिन नहाय–खाय विधि गरिँदैछ । चार दिनसम्म मनाइने छठपर्वअन्तर्गत पहिलो दिनमा नहाय–खाय विधि गरिन्छ । आजको दिनलाई अरबा–अरबाइन पनि भनिन्छ । व्रतीले भोजनमा माछा, मासु, लसुन, प्याज, कोदो, मसुर वस्तु परित्याग गरी आजकै दिनदेखि व्रत बस्ने परम्परा रहेको छ । छठपर्व अत्यन्त श्रद्धा र भक्तिपूर्वक मनाइन्छ । यसका लागि कात्तिक शुक्लपक्ष लाग्नेबित्तिकै व्रतीले सात्विक..
काठमाडौँ, १३ कात्तिक मंगलबार भाइटीका नलगाएका नेवार समुदायले बुधबार लगाउँदैछन् । मंगलबार म्हः पूजा अर्थात् आत्मपूजा गरेका नेवार समुदायले बुधबार किजा पूजा अर्थात् भाइटीका लगाउन लागेका हुन् । मंगलबार नेपाल सम्वतको नयाँ वर्ष भएकाले आज किजा पूजा मनाउन लागिएको नेवार समुदायका अगुवाहरुले बताएका छन् । बुधबार बिहान पनि केही समय द्वितीया तिथि रहेकाले भाइटीका लगाउन सकिने उनीहरुको भनाइ छ । कतिपयले भने नेपाल..
काठमाडौँ, १२ कात्तिक यमपञ्चकको पाँचौँ दिनलाई भाइटीका अर्थात् भातृद्वितीया भनिन्छ। आजकै दिन घरमा नित्यकर्म गरी शास्त्रीय विधिअनुसार यम, यमुना र अष्टचिरञ्जीवीको पूजा गरिन्छ। नेपाल पञ्‍चांग निर्णायक समितिका अनुसार भाइटीकाको शुभ साइत ११ :५५ बजे निस्किएको छ। आज दिनभर टीका लगाउन बाधा नपरे पनि साइत खोज्नेका लागि अभिजित् मुहूर्तको शुभ साइत दिइएको समितिले जनाएको छ। बहिनी यमुनाले आफ्ना दाजु यमराजलाई यमलोकको कार्यबाट बिदा लिएर..
काठमाडौँ, ११ कात्तिक म्हः पूजा कहिले गर्ने भन्नेमा नेवार समुदाय विभाजित भएका छन् । विशेषगरी पहाडी जिल्लाका नेवार समुदायले आजै आत्मपूजा गरी मंगलबार भाइटीका लगाउने तयारी गरेका छन् । तर यस वर्ष नेपाल पञ्चांग निर्णायक समितिले भने भाइटीकाको दिन मंगलबार म्हः पूजा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । म्हःको शाब्दिक अर्थ देह या शरीर हो । यसअर्थमा म्हः पूजाको अर्थ आफ्नो देहको पूजा..
काठमाडौँ, १० कात्तिक लक्ष्मी पूजाका दिन महालक्ष्मीको विधिपूर्वक पूजा गरिन्छ । लक्ष्मी पूजाका दिन देवी लक्ष्मीको आराधनासहित पूजा गर्नाले सुख, शान्ति र ऐश्वर्य मिल्ने विश्वास गरिन्छ । यस दिन केही विशेष कुरामा ध्यान पुर्‍याउनु भने पर्छ । अन्यथा घर आएकी लक्ष्मीसमेत फर्किने जनविश्वास छ । लक्ष्मी पूजाका दिन नगर्नुस् यस्ता काम : १. लक्ष्मीपूजाको दिन बिहान सबेरै उठ्नुहोस् । छिटो उठेर सरसफाइ सहित..
काठमाडौं, १० कार्तिक । आज कुकुरको समेत पूजा आजा गरेर कुकुर तिहार मनाइँदैछ । यस वर्ष चर्तुदशी तिथि बिहान र दिउँसोदेखि औसी छुने भएकाले साँझ लक्ष्मीको पूजा र बिहान कुकुर तिहार मनाइँदैछ । सबै नेपालीका घर आगनमा कुकुरलाई टीका तथा माला लगाइदिएर मीठा मीठा खानेकुरा खान दिई पूजा गरि मनाईँदैछ । यस दिन कुकुरको पूजा गरी खानेकुरा खान दिए यमराजको ढोकामा द्वारपालका रुपमा..
काठमाडौं, ९ कार्तिक । हिन्दुहरुको दोश्रो महान पर्व अन्र्तगत आजबाट यमपञ्चक सुरु भएको छ । यस दिन हरेकको घरमा कागको पुजा गरि मनाईदै छ । विशेषगरी सन्देश वाहकको पंक्षीको रुपमा कागलाई पूजा गर्ने चलन पहिलादेखि नै चलिआएको मानिन्छ । यस्तै, आज साँझदेखि यमराजलाई प्रशन्न बनाउन दीपदान गर्ने चलन पनि रहेको छ । दीपदानको महिमा यसरी दीपदान गर्नाले यम यातनाबाट मुक्त भइन्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको..
काठमाडौँ, ८ कात्तिक नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यही कात्तिक १२ गते को भाइ टीकाको साइतको समय स्थानअनुसार फरक फरक तोकेको छ । विभिन्न स्थानमा एउटै तिथीमा भाइटीका परे पनि समय भने फरक रहेको छ । समितिका सभापति प्रा.डा. माधव भट्टराई र सदस्य सचिव आचार्य सन्तोष बशिष्ठले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरि भाइटिकाको समयतालिका सार्वजनिक गरेका हुन् । विज्ञप्ति अनुसार काठमाडौंमा टीकाको साइत कात्तिक १२..
काठमाडौँ, ७ कात्तिक । सरकारले यही कात्तिक १३ गते किजापूजाको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही कात्तिक ५ गतेको निर्णयअनुसार उक्त दिन देशभरका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय, सङ्घ–संस्था तथा शिक्षण संस्थामा समेत सार्वजनिक बिदा हुने भएको छ । ..
वीरगञ्ज, कात्तिक ७ भारतको कोलकाता घर भई विगत ३१ वर्षदेखि वीरगञ्जको माईस्थानमा फुलको व्यापार गर्दै आउनुभएका सुदर्शन मानिकले तिहारलाई लक्षित गरी २० हजार सयपत्री फूलको माला भारतबाट ल्याउनुभएको छ । कोलकाताबाट रु ५० मा पाइने सयपत्री फूलको स्थानीय बजारमा प्रति माला रु ७५ देखि १०० सम्म बिक्री हुँदै आएको छ । आर्थिक लाभ भएपछि अन्य व्यापारी पनि यस व्यवसायतर्फ आकर्षित हुन थालेका..
काठमाडौँ, ४ कात्तिक सबैजसो साल कार्तिक महिनाको आमावस्या तिथिमा दीपहरुको पर्व दिपावली मनाइने गर्छ । त्यस दिन देवी लक्ष्मीको साथमा गणेश तथा माता सरस्वतीको समेत विशेष पूजा हुने गर्छ । यदी ध्यान पूर्वक हेरियो भने लक्ष्मीको चित्रको साथमा सरस्वती र गणपति समेत हुने गर्छन् । त्यस फेटोमा पनि केही सन्देश लुकेको हुने गर्छ । यस्तो छ ज्योतिषाचार्य तर्क धनकी देवी लक्ष्मीमाताको तस्वीरमा सरस्वती..
काठमाडौँ, ३ कात्तिक नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यस वर्षको तिहार पर्वका सम्बन्धमा भ्रम सिर्जना गर्ने गरी विभिन्न माध्यमबाट भइरहेको प्रचारप्रसारका पछि नलाग्न आह्वान गरेको छ । समितिले आज विज्ञप्ति प्रकाशित गरी यही कात्तिक ८ गते शुक्रबारदेखि यमपञ्चक शुरु हुने जनाएको छ । कात्तिक ८ गतेदेखि यमदीपदान शुरु हुन्छ । कात्तिक ९ गते शनिबार कागतिहार, कात्तिक १० गते आइतबार कुकुर तिहार र लक्ष्मीपूजा,..
बुटवल, २७ असोज बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलगायत यससँग सम्बन्धित क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन तथा विकास गर्ने उद्देश्यले प्रदेश नं ५ सरकारले लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०७६ सञ्चालन गरेको छ । भ्रमण वर्षमा लुम्बिनी र यससँग सम्बन्धित क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिएका छन् । यसले लुम्बिनी मात्र नभएर यससँग सम्बन्धित कपिलवस्तुमा रहेको गौतमबुद्धले २९ वर्षसम्म बिताएको राजा शुद्धोधनको दरबार तिलौराकोट क्षेत्र, कनकमुनि बुद्धको जन्मस्थल रहेको निग्लीहवा,..
भक्तपुर, २६ असोज बडादशैँको अन्तिम दिन कोजाग्रत पूर्णिमाको अवसरमा आज राष्ट्रप्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भक्तपुरको प्रसिद्ध नवदुर्गा मन्दिरमा सरिक हुनुभई नवदुर्गा भवानीको पूजाअर्चना गरेर टीका प्रसाद ग्रहण गर्नुभएको छ । सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई नवदुर्गा मन्दिरका नाइके कृष्णकुमार वनमालाले नवदुर्गाको पूजा एवं दर्शन गराएर नवदुर्गा भवानीको जमरा एवं टीका, प्रसाद, फूलमाला, बिमिरो र पञ्चरङ्गी धागो प्रदान गर्नुभएको थियो । उक्त अवसरमा राष्ट्रपति..
काठमाडौँ, २३ असोज चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणले नेपाल र चीनबीच प्राचीन सम्बन्ध जोड्ने बौद्ध दर्शन र संस्कृतिलाई थप प्रवद्र्धन गर्ने देखिएको छ । बौद्ध दर्शनका शान्ति र अहिंसाका शिक्षाले यी मुलुकलाई विगतदेखि नै नजीकबाट जोड्दै आएकामा यस भ्रमणले नेपालका बौद्ध सम्पदाले पनि अन्तरराष्ट्रिय तहमा महत्व पाउने आशा गरिएको छ । राष्ट्रपति सीको यही असोज २५ र २६ गते नेपालको..
रुपन्देही, २३ असोज पाल्पाली फौजले अङ्गे्रजलाई परास्त गरेको बुटवलको जीतगढीमा आज सराएं नाच प्रदर्शन गरिएको छ । गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पा जिल्लामा बडादशैंको अवसर पारेर नाचिने सराएं नाच लोप हुने खतरा रहेको भन्दै ती जिल्लाबाट बसाइँ सरेर तराई झरेका स्थानीयवासीले यहाँ प्रदर्शन गरेका हुन् । स्थानीयवासीले खुडा, तरबार, खुकुरीसहितका हतियार प्रदर्शन गर्दै सराएं नाचेका हुन् । यो नाच कोत वा मन्दिर नजिकैको..
काठमाडौँ, २२ असोज काठमाडौँको असन क्षेत्रका तुलाधर समुदायले खड्ग जात्रा गरी आज दशैँ मनाएका छन् । हाल काठमाडौँ महानगरपालिका–२७ मा पर्ने असन तथा त्यस वरपर क्षेत्रका तुलाधरले विजया दशमीको भोलिपल्ट विशेष बाजागाजासहित जात्रा गरी आसुरी शक्तिलाई परास्त गरेर उनीहरुले टीका, जमरा लगाउने प्रचलन छ । बौद्ध संस्कृतिमा विश्वास गर्ने यो समुदायले राक्षसी प्रवृत्तिबाट मुक्त भई मानव कल्याणका लागि खड्ग जात्रा गर्ने परम्परा..
काठमाडौं, २२ असाेज । आज एकादशी। दशमीको दिन टीका थाप्न नभ्याएकाले आज पनि टिका लगाउँदै छन्। कोजाग्रत पूर्णिमाको फुलपाती नसेलाउन्जेलसम्म टीका लगाउने चलन छ। यस दिन पनि घरघरमा टीका थाप्न जानेहरुको विशेष चहलपहल रहन्छ। देशका कतिपय स्थानमा भने विजयादशमीको दिन मात्रै टिका थाप्‍ने चलन छ। हिन्दु तिथीको ११ औँ दिनलाई एकादशी भनिन्छ। आजको दिन ब्रत वस्ने, फलफूल खाने अनि एकादशी महात्मयको कथा सुन्ने..
Results 608: You are at page3of 21